နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၏ ဘုံပြဿနာအများအပြားကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ - သတင်း - Kunshan Amidi Precision Machinery Co.,Ltd
နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၏ ဘုံပြဿနာများစွာကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။
အစောပိုင်းအဆင့်တွင် linear springs ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်မှ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စပရိန်ကို သုံးချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုပြောင်းရမှန်းမသိဘူး။ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စမ်း အရေအတွက်ကို မသိရပါ။ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ရှိပြီးသားမှို၏လိုအပ်သောဖိအားကို ဦးစွာသိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက်သက်ဆိုင်ရာတန်ချိန်၏နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နွေဦးကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် လိုအပ်သောဖိအားတန်ဖိုးကို မသိပါက ၎င်းကို တွက်ချက်နိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ပုံစံခွက်အတွင်းရှိ မူရင်း linear spring မှပေးသော စုစုပေါင်းဖိအားသည် လိုအပ်သောဖိအားသည် ကနဦးဖိအားဟုတ်မဟုတ် သိရှိရမည်ဖြစ်သည်။ -pressure) သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးဖိအား (full stroke)။ ဒါကို သိပြီးတာနဲ့ လိုချင်တဲ့ ဖိအားတန်ဖိုးကို ရနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ linear spring pressure ကိုရှာဖွေရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာထုတ်လုပ်သူ၏ထုတ်ကုန်ဖိအားဇယားကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဇယားမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံစံခွက်အတွင်းရှိ linear spring ၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အရောင်၊ ကြိုတင်တင်ဆောင်မှုနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကို သိရှိနိုင်ပြီး စပရိန်ဖိအားကိုရရှိရန် ဖိအားတိုင်းကိရိယာကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နွေဦး တပ်ဆင်ခြင်း။
ပထမဦးစွာ၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စပရိန်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်အပေါ်နှင့် ပစ္စတင်တံကို အောက်သို့ အာရုံစိုက်ပါ။ ဆလင်ဒါအတွင်းတွင် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီများရှိနေ၍ ဆလင်ဒါ၏အပေါ်ပိုင်းတွင်ရှိသောအခါ၊ ဆီများသည် ဆလင်ဒါ၏ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းနှင့် ပစ္စတင်တံဆီသို့ စီးဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပစ္စတင်၏လေဖြတ်ရွေ့လျားမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော (ပစ္စတင်၏လေဖြတ်ခြင်းမဖြစ်အောင် လုံလောက်သောချောဆီထားရှိရန်) ) ဒုတိယအနေနှင့်၊ တပ်ဆင်ချိန်အတွင်း၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက် စက်ကိရိယာ၏ တပ်ဆင်မှုအမှတ်နှစ်ခုကို သင့်လျော်သောအနေအထားတွင် ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စပရိန်၏ အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ အဆစ်များသည် မျဉ်းပြိုင်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့် မတပ်ဆင်မီ အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ အဆစ်များသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော တပ်ဆင်မှုအနေအထားတွင်ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါက ပစ္စတင်တံ သို့မဟုတ် ဆလင်ဒါကို နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ လှည့်နေသော အဆစ်များ ပြေလျော့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မီးအရင်းအမြစ်နှင့်နီးကပ်စွာရှောင်ရှားရန် (ဆလင်ဒါအတွင်းတွင် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီနှင့် ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့များရှိနေသောကြောင့်)။
နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စပရိန်ကို မသွင်းမီ ပလိန်းတံကို ထိပ်သို့ အပြည့်အဝ ဖြန့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ၎င်းသည် အပြည့်အဝ တိုးချဲ့ပြီး ဖောင်းကားခြင်းမရှိပါက၊ နေရာချထားသည့် လက်စွပ်သည် မှားယွင်းသော အနေအထားတွင် ရှိနေနိုင်သည်။ ပစ္စတင်ခေါင်းထိပ်ရှိ ဝက်အူအပေါက်ထဲသို့ T-wrench ကိုသုံး၍ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအဆို့ရှင်ကို နှိပ်ရန် သင့်လျော်သောကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။ ဆလင်ဒါအတွင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့များ ကုန်သွားပြီးနောက်၊ ပစ္စတင်အင်္ကျီလက်စွပ်နှင့် နေရာချထားသည့်လက်စွပ်ကို တင်းကျပ်စေရန် ပစ္စတင်တံကို အထက်သို့ ဆွဲချပါ။
4. နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စပရိန်ကို ဖောင်းပွသောအခါတွင် သတိထားရမည့်အချက်များ
(၁) နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စပရိန်ကို ဖြည့်သွင်းသောအခါ၊ အထူးပလပ်ဖောင်း သို့မဟုတ် လေဖြည့်ကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်သည်။ လွတ်လပ်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွက် အဆင်ပြေပါက ဦးစွာ ဖောင်းပွနိုင်သည်။ ထိုင်ခုံပြားစနစ်၏ နိုက်ထရိုဂျင်စပရိန်ဘက်ခြမ်းသည် အလုပ်နေရာ၌ ဖောင်းနေရပါမည်။
(၂) နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နွေဦး၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအားသည် 20â„ƒ ရှိသောအခါ၊ စံဖိအားသည် 150 (bar) ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည် 130bar ထက်နည်းပါက၊ ၎င်းကို သာမန်နိုက်ထရိုဂျင်ပုလင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 130 bar နှင့်အထက်တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအား မြှင့်တင်သည့်ကိရိယာ လိုအပ်သည်။
(၃) လေတိုးခြင်းမပြုမီ၊ ဘေးကင်းရေးလက်စွပ်ကို တပ်ဆင်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုပါ၊ နှင့် ပလပ်ဂါတံကို လုံးလုံးလျားလျား ချဲ့ရန်အတွက် T-shaped လက်ကိုင်ကို အသုံးပြုပါ၊ ထို့နောက် ဖောင်းပွမှုအတွက် လိုအပ်သော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအားတန်ဖိုးကို ချိန်ညှိပါ။
(၄) ဖောင်းပွသောအခါတွင်၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအဆို့ရှင်မှတစ်ဆင့် လေစီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းသည် ဖောင်းပွမှုအဆို့ရှင်ကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန်နှင့် လေယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် အရှိန်အဟုန်မသင့်ပါ။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြီးပါက၊ ငွေဖောင်းပွမှုပေါက်ကို ဝက်အူပလပ်ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ပါ။
မှတ်ချက်- လေတိုးလာချိန်တွင် ဘေးကင်းသော ခွဲစိတ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မလိုအပ်ဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဘေးကင်းရေး လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ရပါမည်။